चीन व्यावसायिक मुद्रांकन धातु मोल्ड निर्माता र आपूर्तिकर्ता - SunBright टेक्नोलोजी
घर > उत्पादनहरू > धातु पार्ट्स निर्माण > मुद्रांकन भागहरू
व्यावसायिक मुद्रांकन धातु मोल्डहरू
हामीले R&D, डिजाइन, उत्पादन र बिक्रीलाई एकीकृत गर्ने परिशुद्धता उत्पादन कम्पनीसँग व्यावसायिक स्ट्याम्पिङ मेटल मोल्डहरू आपूर्ति गर्छौं। हामीसँग विभिन्न उन्नत उत्पादन मेसिनहरूको लगभग 1,000 सेटहरू र उच्च-परिशुद्धता परीक्षण र निरीक्षण उपकरणहरूको 20 सेटहरू छन्। हामीले 20 वर्ष भन्दा बढीको लागि ISO 9001 र AS 9100D प्रमाणीकरण पास गरेका छौं। उच्च गुणस्तरको माग पूरा गर्न, हामीसँग विस्तृत गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली र पूर्ण-सुसज्जित मापन उपकरणहरू छन्। हाम्रो मुख्य बजार युरोपेली र संयुक्त राज्य अमेरिका मा छ। हाम्रो व्यावसायिक व्यवस्थापन टोलीसँग एक बलियो प्राविधिक पृष्ठभूमि र उत्कृष्ट व्यवस्थापन प्रणाली छ, जसले ग्राहकहरूलाई उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू र सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छ।
धातु मुद्रांकन एक अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया हो जहाँ रोल गरिएको वा पाना धातु। यो एक प्रेस मा राखिएको छ जुन भाग को इच्छित आकार मा एक डाई छ।
बल र कम्प्रेसनको साथ, डाइ धातुमा थिचिन्छ।
पूर्वनिर्धारित समय पछि, आंशिक रूपमा पूरा भएको भाग हटाइन्छ।
यद्यपि यो बुझ्न धेरै सजिलो लाग्न सक्छ, वास्तवमा, त्यहाँ धेरै फरक चरणहरू छन् जुन लिन आवश्यक छ जसमा ट्रिमिङ, परिष्करण, र समाप्त भाग उत्पादन गर्न डिजाइन गरिएका अन्य प्रक्रियाहरू समावेश छन्।
यी व्यावसायिक मुद्रांकन धातु मोल्डहरू सावधानीपूर्वक सटीकता र मापनको साथ सटीक धातु आकारहरूद्वारा निर्मित हुन्छन्।
सतहको नरमपन Ra 0.1-3.2 हो।
CNC घुमाउने कार्य दायरा Ï†0.5mm-Ï†150mm*300mm हो
CNC मिलिङ कार्य दायरा 510mm * 1020mm * 500mm छ
3. उत्पादन सुविधा र आवेदन
मोल्ड एक म्याट्रिक्स हो जुन विशेष रूपमा केहि औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाहरूमा उपकरणको रूपमा डिजाइन गरिएको छ जस्तै मोल्डिंग, कास्टिङ, गहिरो रेखाचित्रले वर्कपीस वा प्रशोधन गरिने सामग्रीलाई अन्तिम वा मध्यवर्ती फारम दिन कार्य गर्दछ।
हामी प्रोफेशनल स्ट्याम्पिङ मेटल मोल्डहरूलाई बलियो बल ब्याकअप प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न सक्षम छौं। यी मोल्डहरू मुख्यतया औद्योगिक क्षेत्रहरूको विस्तृत विविधताका लागि प्रयोग गरिन्छ।
4. उत्पादन विवरणहरू
सटीक मेटल स्ट्याम्पिङमा, मोल्ड सामान्यतया दुई वा बढी आधा-शेलहरू मिलेर बनेको हुन्छ, जुन टुक्राको आकारको साथ स्पेसको क्षेत्र सीमांकन गर्न सकिन्छ।
उत्पादन मोल्डहरू सामान्यतया कठोर इस्पात वा टेम्पर्डबाट बनेका हुन्छन्।
यी व्यावसायिक मुद्रांकन धातु मोल्डहरू ISO 9001 र AS9001 NADCAP - NDT प्रमाणपत्र मानक अनुसार आलोचनात्मक रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ।
उच्च गुणस्तर पूरा गर्न, हामीसँग विस्तृत गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली र पूर्ण-सुसज्जित मापन उपकरण छ।
प्याकेज मानक निर्यात प्याकेज हो। सबै प्रकारका ढुवानी तरिकाहरू एक्सप्रेस, हावा र समुद्र द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हाम्रो ग्राहकहरु बाट स्वीकृति र सन्तोषजनक प्राप्त गर्न को लागी, यो हाम्रो लागि द्रुत वितरण, सावधान ढुवानी व्यवस्था र निरन्तर सेवाहरु को लागी आवश्यक छ।
हामी ग्राहक-उन्मुख, गुणस्तर-पहिलो व्यापार दर्शनलाई गहिरो रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं।
हामीले हाम्रो प्राविधिक क्षमता, गुणस्तर र व्यवस्थापन कौशल र सेवालाई निरन्तर सुधार गर्न "कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यक्रम" पनि लागू गर्छौं।
सनब्राइट एक उच्च-प्रविधि उद्यम हो जसले R&D, उत्पादन र उच्च-अन्तका उत्पादनहरू र सटीक घटकहरूको बिक्रीलाई एकीकृत गर्दछ। उत्पादनहरू संचार, सटीक उपकरणहरू, चिकित्सा उपकरणहरू, उच्च-गति रेलहरू, अटो, उड्डयन र अन्य उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
हामी कसरी गुणस्तर ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं?
कार्यशाला र उत्पादन मास सख्त रूपमा ISO 9001 र AS 9100D प्रमाणीकरण मानक अनुसार नियन्त्रण गरिन्छ। पूर्व-उत्पादन नमूना ठूलो उत्पादन अघि पुष्टि भयो, ढुवानी अघि अन्तिम निरीक्षण।
तपाईं हामीबाट के किन्न सक्नुहुन्छ?
सीएनसी टर्निङ र सीएनसी मिलिङ, कस्टम सीएनसी पार्ट्स, सीएनसी अटो स्पेयर पार्ट्स, डाइ कास्टिङ पार्ट्स, फोर्जिङ पार्ट्स, इन्जेक्शन मोल्ड, मोल्ड आदि सहित सीएनसी परिशुद्धता मेसिनिङ पार्ट्स।
तपाईंले हामीबाट किन अन्य आपूर्तिकर्ताहरूबाट किन्नु हुँदैन?
हामी 20 बर्ष भन्दा बढीको लागि अनुकूलन मा अनुभवी छौं। "व्यावहारिकता" को अवधारणा संग, हामी कच्चा माल देखि प्रशोधन ईन्जिनियरिङ् र निर्माण गर्न को लागी ग्राहकहरु लाई एक-स्टप उच्च गुणस्तर समाधान प्रदान गर्दछ। उत्पादनहरू संचार, सटीक उपकरणहरू, चिकित्सा उपकरणहरू, उच्च-गति रेलहरू, अटो, उड्डयन र अन्य उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
हामी के सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छौं?
हामी सीएनसी सटीक मेशिन सेवा, पाना धातु निर्माण सेवा, इन्जेक्सन प्लास्टिक मोल्ड सेवा, सौन्दर्य हेरचाह उपकरण र शीर्ष गहना को केहि पूर्ण उत्पादन सेवा प्रदान गर्न सक्छौं।
हट ट्याग: व्यावसायिक मुद्रांकन धातु मोल्डहरू, अनुकूलित, थोक, चीन, कम मूल्य, गुणस्तर, टिकाऊ, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, मूल्य, उद्धरण
मुद्रांकन मेकानिकल धातु अवयवहरू
स्ट्याम्पिङ बेन्डिङ वेल्डिङ शीट मेटल पार्ट्स
उच्च गुणस्तर धातु मुद्रांकन निर्माण